4.3.20 MCS COVID-19 အသစ်ပြောင်းခြင်း – Mason ဆိုကျောင်းများ COVID-19 ဌာနချုပ်
4.3.20 MCS COVID-19 အသစ်ပြောင်းခြင်း
COVID-19 & MCS Updates / အားဖြင့် Tracey Carson
ချစ်ခင်ရပါသော Mason City ကျောင်းမိသားစု,
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝေးလံခေါင်ဖျားလေ့လာမှုအဖြစ်မှန်၌အခြေချနေစဉ်သင်၏စိတ်ရှည်မှုနှင့်ရှုထောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်. သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံစူးစမ်းကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင် COVID-19 website, we encourage you to do so.
စောင့်ကြည့် ဒီဗီဒီယို of Superintendent Jonathan Cooper sharing ways our Comet CommUNITY is coming together!
မနေ့ကည2နာရီမှာ, Mason City ကျောင်းများတွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ, နှင့် 2,902 အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွက်အတည်ပြုဖြစ်ပွားမှု. အောက်ပါတို့မှာကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများနှင့်ပြည်သူလူထု၏ဘုံမေးခွန်းများကိုတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သည်။
ဆရာများတွင်အကြောင်းအရာနယ်ပယ်အားလုံးမှလေ့လာသင်ယူခြင်းများပါဝင်သည်. Learning plans will includeamix of introducing new content and allowing students time to practice and reinforce what has been introduced.
အထူးteachersရိယာဆရာများ (ထိုကဲ့သို့သောအားကစားရုံအဖြစ်, ဂီတ, နှင့်အနုပညာ) will each share one lessonaweek for students to engage in.
အကယ်၍ သင့်ကလေးသည်အဆင့်အတန်းရှိလျှင် 7-12:
Learning plans will primarily ask students to utilize tools and resources they are familiar with and have used throughout this year. အကယ်၍ ကျောင်းသားသည်သင်ယူမှုအစီအစဉ်၏မည်သည့်ရှုထောင့်နှင့်မဆိုထပ်ဆောင်းထောက်ခံမှုသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်မှုလိုအပ်လျှင်, they are strongly encouraged to take advantage of the Comet Connect Time (see below) and/or email their teacher.
သင်သည်သင်၏ကျောင်းသားလွှမ်းမိုးနေသည်နှင့်သင်ယူမှုလှုပ်ရှားမှုများရှည်လျားလွန်းသို့မဟုတ်သင်၏ကျောင်းသားတိုးချဲ့သင်ယူမှုလှုပ်ရှားမှုများအဘို့အဆင်သင့်ကြောင်းတွေ့ရှိရလျှင်, please reach out to your teacher.
Mason City Schools Child Nutrition Department serves meals on Mondays and Wednesdays from 11:30AM-1:00 PM at Mason Intermediate School, 6307 Mason-Montgomery Road, နှင့် 11:30AM-12:30PM at St. Vincent DePaul, 1065 Reading Rd, and Western Row Elementary, 755 Western Row Road.
We encourage you to support #CometCarryout if you are able to do so. Simply ယောရှုနေရာမှလှူဒါန်းပါ and choose “Comet Carryout” to blessafamily in need withameal from one of our local businesses.
Any registered voter who has not already castaballot in the Primary Election can request an application to vote by mail by calling the Warren County Board of Elections at 513-695-1358. Voters can also vote by mail by downloading, filling out, printing, signing, and mailing their application to their county Board of Elections. Your completed ballot must be postmarked by Monday, ပြီလ 27.
When you receive your ballot by mail from the Board of Elections, it will include prepaid return postage. Your completed ballot can also be delivered to the Warren County Board of Elections (520 Justice Drive, လက်ဘနွန်, အိုး 45036) and placed in the available receptacle located outside the office no later than 7:30pm on April 28.
4.24.20 MCS COVID-19 မိသားစုမွမ်းမံမှု
4.21.20 MCS COVID-19 မိသားစုမွမ်းမံမှု
4.17.20 MCS COVID-19 မိသားစုမွမ်းမံမှု
4.14.20 MCS COVID-19 မိသားစုမွမ်းမံမှု
ဝန်ထမ်း RLE မွမ်းမံမှုများ